I-cheese slicer, eyenziwe nguT Thor Bjørklund waseNorway
I-cheese slicer, okanye i-cheese plane, yinto eyenziwa ngobuchule eyenziwa ngumenzi wekhabhinethi waseNorway, uTrans Bjørklund. Ukusebenzisa umgaqo ofana nomlobi wezinto ezifunyenweyo kwi-workshop yakhe, uBjørklund wagcwalisa isixhobo sokwenza amancinci amancinci, afanayo kunye neentshizi ezinzima eNorway, ezifana ne-gouda kunye ne-jarlsberg.
UTrans Bjørklund ucela i-First Cheese Slicer
UBjørklund wasungula kwaye waselungelo lobunikazi lendiza yashizi ngo-1925.
Wasekela i-Thor Bjørklund ne-Sønner njenge-AS eLillehammer kwiminyaka emibini kamva, eyayiyimveliso kuphela yaseNorway ye-traditional cheese yase-Norway (ostehøvel), kunye neyokuqala ehlabathini. Ukususela ngoko, inkampani ikhiqize ngaphezu kwezigidi ezingama-50 zeeshizi. Ekuqaleni, kuthatha iyure ukuvelisa isonka ngasinye, ngelixa namhlanje, malunga nee-7,000 iifayile zingenziwa ngeyure.
Ezinye izinto zokuLungisa iiCheese
I-plane ye-cheese ayilona kuphela into eyenzelwe ishizi, nangona kunjalo. Ijezi lomsizi ngokwalo lenzelwe ukulwa nombandela weeshizi ezincinci . Ngomlenze otywebileyo, umsiki weeshizi uyanciphisa inani le-cheese elithambileyo elinamathele kumtya. Uninzi lwazo luya kuba nemingxuma ekunciphiseni amathuba okutshiziwa ushizi kumkhwa. Umseshi we-cheese ubonisa ibhodi enefayile kwisandla sokusika. Intambo inesilinganisi esihle, kwakhona senzelwe ukunciphisa ishizi esithambileyo ngaphandle kokunamathela.
Isenzo socingo lweeshizi sinjengee-garotte.
Ziqhelise ukuthetha isiFrentshi imihla ngemihla
Abanqwelisi basenokukwazi ukusebenzisa le nkqubo elula
Mozart kunye neMvelaphi ye-Twinkle Twinkle Little Star
Iingcali zeNkwenkwezi zaBafazi